तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो ह’त्या ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो ह’त्या ?
हिन्दू नारीहरुका सामू तीजको रमझम भित्रिएको बेला रुपन्देहीमा एउटी चेलीको निकै रहस्यमय मृ’त्यु घटना बाहिर आएको छ । दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकी रुपन्देही तिलोत्तमा-८ मणिग्रामस्थित ४ नम्बर टोल माइती घर भएकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रहस्यमय मृ’त्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त नगरपालिका-५ घर भएका ४३ बर्षीय टीका पौड्यालकी श्रीमती सीताको आफ्नै घरको कोठामा रहस्यमय मृ’त्यु भएको घटना मंगलबार माइतीजनले पत्रकार सम्मेलन गरि बाहिर ल्याएका हुन् । भदौ ६ गते तीजसमेत मानेर घर फर्किने गरि माइतीमा आएकी सीतालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ ‘तिमी घर जाउ म पनि साँझ घर आउँछु’ भनेर पाल्पाबाट फोन गरे । उनले श्रीमानको बचन हार्न नसकी उनी घर फर्किइन् । उनी त्यस दिन दिउँसो घरबाट हिँडेका थिए । माइतीले उनी घरबाट हिँडेदेखि राति ९ बजेसम्म माइतीले फोन गरिरहे तर उनको फोन उठ्दै उठेन । अर्काे दिन एक्कासी अर्को माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो । माइतीजन त्यहाँ पुग्दा मुहार र’क्ता’म्मे अवस्थामा सीताको मृ’त्यु भइसकेको थियो । उक्त दृश्य देख्न साथ त्यहाँ पुगेका सीताका बाबु-आमा बे’हो’स भ’ई ढ’ले ।
प्रत्यक्षदर्शी माइतीजनका अनुसार उनी आफ्नै घरको कोठामा मुखबाट रगत बगेको, गलामा चुङ्गीले कसिएको र भुँईमा लडेको अवस्थामा भदौ २० गते विहान मृ’त फेला परेकी थिईन् । मृ’त’क सीताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारीले छोरीको ह’त्या नै भएको भनि बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएको तर प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन नमानेपछि त्यसको विरोधमा सयौं माईतीजनले आज बुधबार दिउँसो त्यस प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
तीज मान्न माइती आएकी सीता आमा–बाबुलगायतका माइतीजनसँग तीजमा के के चिजहरु किनमेल गर्ने भन्ने बारे चर्चा पनि चल्दै थियो । त्यही क्रममा एक्कासी उनका श्रीमान टीकाको फोन आयो । ‘ल आज साँझ तिमी घर आऊ दिदीको छोराको बर्थडे मनाउनु छ’ भन्दै टीकाले फोनमा भने ।टीकाले पाल्पा तानसेनको होलाङदी जाने बाटोमा ‘दि दरबार कटेज एण्ड रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले त्यहीँबाट श्रीमतीलाई तिमी घर जाँदै गर्नु म साँझ आउँछु भनेर घर पठाएका थिए । त्यसपछि उनी भदौ १९ गते दिउँसो करिब २ बजेको समयमा माइत बाट घर हिडेकी थिइन् । माइतीजनले भने सीताको हत्या योजनाबद्ध गरिएको भन्दै न्यायको खोजीमा छ ।
त्यसैदिन साँझ करिव साढे ६ बजेको समयमा सिताका श्रीमान ससुराली आउँछन् र मेरो घरमा आई तपाईकी छोरी अब वितारा पर्ने भई । मैले त आनन्दको जीन्दगी जिउछु भनी ध’म्की’पू’र्ण कुरा गरी अरु केही नबोली अगाडीको ढोका जोडले लगाउँदै हुँईकिदै त्यहाँबाट हिँडे हुन् । मेरी भान्जीको घर र मेरो पसल सँग–सगै छ । उनले म’दि’रा पिएको आभास हुन्थ्यो । त्यसलगत्तै मैले पटक पटक भान्जीलाई फोन हाने । साँझ ७ बजे देखि साँझ ९ बजे सम्म भान्जीलाई फोन हान्दा पनि फोन उठेन । अर्को दिन विहान ५ बजेर २५ मिनेट जाँदा उनका श्रीमानको ८ सेकेन्ड मात्रै मिसकल आयो । हिजो जाँड र’क्सी पि’ए’र केहीँ बोलिकी भनेर एस्क्युज गर्न होला भनेर मैले कल ब्याग गरिन । त्यसलगत्तै भाईलाई फोन आएछ । उनले मेरो घर आउनुस् भन्नुको सट्टा मेरो घरमा जानु भनेछन् । के के भयो र भनेर सोध्दा केही भएको छैन एउटा काम छ भनेछन् । सासु ससुरालाई फोन गरेर पनि मेरो घर छिट्टै जानुस् भने छन् ।
कारण सोध्दा केहीँ भनेर मात्र आइहाल्नु पर्ने भयो । अति जरुरी काम पर्यो भने छन् । त्यसपछि मृ’त’क’की आमा अर्थात् मेरो दिदी पुनम भण्डारी, भाईहरु पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेल पहिला त्यस घरमा पुगेछन् । म पछि मात्रै गएको हुँ । उनीहरुले त्यहाँ पुगेर हामीहरुलाई किन हतार हतार बोलाउनु भएको हो ? मेरी छोरी कता छिन् भनि सोध्दा घरमा भएका सासु ससुराले कुनै जवाफै दिएनछन् । त्यति बेलासम्म ज्वाँई घरमा थिएनन् । त्यसको करिव २० मिनेट पछि घरमा ज्वाँई बाहिरबाट घरमा आइ तपाईंहरुको छोरीलाई मार्नमा प्रमुख हात यसैको छ भनी उनको दिदी (जो चितवनबाट माइत आएकी थिईन् विष्णु पौडेल) लाई औँला ठड्याउँदै कराउन थाले । त्यसपछि मृ’त’का बाबु–आमा छोरी जीवित छैनन् भन्ने ठानेर बेहोस भई त्यही ढलेछन् ।
साथमा गएका सालाहरु पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेलले घरभित्र गई हेर्दा अट्याच कोठाबाट वाथरुममा पस्ने ढोकामाथि काटिएको चुङ्गी झुण्डिइरहेको, सीतालाई भुँईमा घोप्टोपारी सिरानीमा टाउको राखिएको, मृ’त’क’को दुवै कोखामा निलडाम रहेको, मु’ख’बा’ट र’ग’त बगी अनुहारमा ल’त्प’त्तिए’को र घाँ’टीको’ दायाँ छेउमा गा’ठो पारिएको चु’ङ्गी’ले कसेको अवस्थाम फेला पारेका थिए । घटना राति २ बजे देखि ५ बजे भित्रको भएको देखिन्छ । एउटै कोठामा सुतेकी श्रीमती सीता यदि आ’त्मा’ह’त्या गर्न लागेको भए श्रीमान चाँहीले बचाउने प्रयास गर्न पर्ने कि नपर्ने ? बचाउनकै लागि डो’री पा’सो का’टि’ए’को’ हो भने श्रीमतीको ज्या’न गइसके पछि परिवारका सदस्य र टोल छिमेकलाई खबर गर्ने कि घर छाडेर भाग्ने ?
बिहान ५ बजे पछिको कलले नै स्पष्ट पार्छ कि उनी त्यति बेलैदेखि घरबाट बाहिर निस्की सकेका छन् घटनाको अबेरसम्म पनि प्रहरीलाई स्वयम् श्रीमान वा परिवारका सदस्यहरुले प्रहरीलाई खबर गर्न किन चाहेनन् र माईतीले नै प्रहरीलाई सूचित गर्नु पर्यो ? ससुरालीमा पुगेर अघिल्लो साँझ दिईएको धम्की स्याल कराउनु बाख्रो हराउनु जस्तै हो ?उनले भदौ ६ गते नै तानसेनबाट गाडीमा बोकेर श्रीमतिलाई तिज मान्ने गरि माईतीमा छाड्न आए पछि फेरी एक्कासी किन बोलाए त्यस साँझ ? कतै योजनाबद्ध त थिएन ? झु’ण्डि’ए’र मृ’त्यु हुने मानिसहरुको प्राय मु’ख’बा’ट र’ग’त बगेको नदेखेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, सीताको मु’ख’बा’ट र’ग’त निकै बगेको देखिन्छ । श’री’र’का विभिन्न भागमा नि’ला डा’म’ह’रु देखिन्छ । झु’ण्डि’ए’र कि घाँ’टी क’सि’ए’र मा’रि’यो’ ? यस विषयमा माइतीलाई डाक्टरले झु’ण्डि’ए’र आ’त्मा’ह’त्या गरेको रिर्पोट दिएको भन्दै त्यसैमा टेकेर प्रहरीले किटानी जाहेर लिन मानेन ।
कतै माथील्लो दवाव त छैन ? माइतीजनले यस्तो आशंका गरेका छन् । श्रोतका अनुसार आ’रो’पी ज्वाँईका एक जना आफन्त नेपाल प्रहरीको माथील्लो पोष्टमा रहेका छन् । आ’रो’पि’त परिवार निकै पैसावाला पनि हुन् । माइतीजन भन्छन्- दुई वर्ष अघि मागी विवाह गरियो । स्टिल बडि भएको हेर्दा उमेर पुगेजस्तो नलाग्ने, केटा कन्य नै होला भन्ने ठानियो । तर पछि बुझ्दै जाँदा उनले पहिला नै विवाह गरेका रहेछन् । पहिलाकीसँग स’म्ब’न्ध वि’च्छे’द गरेर यता अविवाहित हुँ भन्दै झुक्काएर २५ वर्षकी हाम्री चेलीलाई ४० बर्ष नाघेका उनले झुक्काएर विवाह गरेको थाह पाइयो ।
मृ’त’क सिताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारी भने भक्कानिँदै रुँदै भन्छन्–‘मेरी छोरीलाई मा’रे’कै हुन् । उसले आमासँग भन्ने गर्थि रे–‘साँझ रक्सीले टिल परेर आएपछि बसि खानु हुन्न आमा ।अन्ततः बुधबार प्रहरीले आ’त्मा’ह’त्या दु’रु’त्सा’ह’नको मु’द्धा दर्ता गरेपछि धर्ना कार्यक्रम तितर विवतर भएको छ । तर, पनि माइतीजन पक्ष भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरु कानुनी सल्लाह लिँदै र भोलिदेखि विभिन्न सरोकारवालहरु कहाँ न्यायका सन्दभर्मा छलफल गर्न जाने कार्यक्रम बनाएका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डिएसपी मदन कुँवरले आ’त्मा’ ह’त्या दु’रु’सा’हन’को मु’द्धा दर्ता गरिएको र ह’त्या’को पाटोबाट पनि अनुसन्धान हुने बताए । उनले उनका श्रीमानलाई नियन्यन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भईरहेको बताए । मृ’त’क सीताको परिवार गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका ५ वस्तु का हुन् । उनीहरु रुपन्देहीमा बसाइसराई गरे पनि आवत जावत गरिरहेका थिए ।